विमल पाेखरेल काठमाडाैं, २७ फागुन
केही समययता गाँजालाई खुला गरिने विषयमा सञ्चारमाध्यमहरूमा चर्काे बहस भइरहेको छ । नेकपाका २/४ नेताले गाँजा खुला गर्नुपर्ने राय व्यक्त गरेका छन् ।
नेकपा सांसद शेरबहादुर तामाङले गाँजा खुला गर्ने विषयमा गैरसरकारी विधेयक संसदमा दर्ता गराएका छन् । केहीले भने गाँजा खुला गरिनु हुन्न भनेका छन् । सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि केही मान्छेहरूले गाँजामाथि प्रतिबन्ध गरेरै यो देश गरिब भएको प्रतिक्रिया दिएको पाइन्छ ।
यदि गाँजा खुला गरेको भए देश उहिल्यै धनी भइसक्थ्यो । जतासुकै फल्ने, मल र स्याहारसुसार नचाहिने, महँगोमा बिक्री हुने भएकाले गाँजा खेती गर्नुपर्छ भन्ने तर्क जबर्जस्ती प्रचार गरिएको छ ।
नेपालको कानुनले गाँजालाई लागुऔषधको रूपमा लिएको छ । लागुऔषधको रूपमा रहेको गाँजा खुला गर्नुभन्दा पहिले हाम्रो समाज, समाजको चेतनास्तर, समाजको बनावट आदि धेरैबारे अनुसन्धान हुनुपर्ने जरुरी छ ।
तर पैसा पाइन्छ भन्दैमा गाँजाखेती गरिहाल्ने हतारोमा केही नेताहरू लागेका छन् । यो आफैँमा विचित्रको दृश्य हो ।
संसारका धेरै देशहरूले गाँजाका कारण समाजमा धेरै ठूलो असर परेको, नेपालमा पनि गाँजाका कारण सामाजिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत हानि भएकाले प्रतिबन्ध गरिएको हो । अहिले हठात्, गाँजालाई खुला गरिनुपर्ने बहस चलेको छ ।
सन् १८३९ देखि १८४२ सम्म बेलायती साम्राज्यवाद र चीनबीच अफिमयुद्ध भयो । बेलायतले चीनमा अफिम निर्यात गरेर त्यहाँको युवापुस्ता ध्वस्त पार्नु थियो । सोही उद्देश्यले बेलायतले चीनमा अफिम निर्यात गरेको थियो ।
बेलायती कम्पनीहरूले भारत र अफगानिस्तानको अफिम चीनमा लगेर बेच्ने गर्दथे । त्यसको बदलामा बेलायती ती कम्पनीले चीनबाट चाँदी, तामाजस्ता बहुमूल्य खनिज हात पार्दथे ।
परिस्थिति यस्तो भयो कि चीनमा आयात गरिने अफिमको मूल्य तिर्न चीनबाट निर्यात गरिने रेशम, चिया, चाँदीको मूल्यले पनि नपुग्ने भयो । त्यसले एकातिर चीनको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुँदै गयो भने अर्कोतिर युवा पुस्ता अफिमको नशामा समाप्त हुँदै गयो ।
सन् १७७० को दशकमा ब्रिटिसहरूले अफिम चीनमा पठाउँदा अफिमबारे चिनियाँहरू अनभिज्ञ थिए । तर चीनमा अफिमको व्यापार दिन दुई गुना रात चार गुणाले वृद्धि हुँदै भयो । त्यसपछि भारतको विहार, बनारस र अन्य क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा अफिम खेती नै गर्न लगाइयो र खरिद गरियो ।
त्यो अफिमलाई व्यापक मात्रामा चीनमा पठाइयो । सन् १८०० मा चीनमा अफिममाथि प्रतिबन्ध गरिए पनि त्यसलाई रोक्न असम्भव भइसकेको थियो । सन् १८३२ मा चीनबाट चाँदीको निर्यात अकल्पनीय भयो । त्यसको असर यसरी पर्दै गयो कि चीनका गरिब किसानहरू तन्नम हुँदै गए ।
परिणाम यस्तो आयो कि सन् १८३९ मा बेलायतसँग अफिम युद्ध नै छेडियो । बेलायती फौजले चीनका क्वान्चओ, साङ्घाई, श्यामन र निङपोमाथि कब्जा गरे ।
बेलायतीहरूले त्यति सजिलोसँग कसरी कब्जा गरे त ? किनभने लडाकू उमेरका अधिकांश चिनियाँ युवाहरू अफिमले लट्ठ थिए । जति सेना बहादुरीपूर्वक लडे, तिनीहरूको मात्रै तागतले लडाइँ जित्न सम्भव थिएन । अन्ततः चीनले हार्नुपरेको थियो ।
बसेरै धनी हुने सपना
नेकपा सांसद विरोध खतिवडाले गाँजाखेतीबाट नेपालीहरू बसीबसी धनी हुने बताएका छन् । सबैभन्दा खतरनाक कुरा त यो छ कि संसारमा बसेर धनी कुनचाहिँ व्यक्ति भएको छ ? यदि बसीबसी धनी हुने सपना बाँड्ने हो भने त्यो खराब नियतका साथ आएको छ ।
गाँजालाई कानुनी र वैधानिक बनाउने तर व्यवहारमा अवैध आर्जनको बाटो खोल्ने तरिका अपनाइएको हुन सक्छ । विदेशीहरूलाई गाँजा बेचेर धनी हुने भनेको के हो ? विदेशका मान्छेहरू गाँजा चरेस खाएर ध्वस्त होऊन् भन्न खोजिएको हो ?
संसारका कुनै पनि समुदायलाई लागुऔषधबाट पीडित बनाइनु हुँदैन । नेपालबाट उत्पादन र निकासी हुने गाँजा, चरेसले संसारका कुनै पनि मुलुकका नागरिकहरू लागुऔषधबाट समाप्त हुनु हुँदैन ।
लागुऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ (४) क ले गाँजाको खेती गर्न, उत्पादन गर्न, प्रशोधन गर्न, खरिद गर्न, बिक्रीवितरण गर्न, निकासी वा पैठारी गर्न, ओसारपसार गर्न, सञ्चय गर्न वा सेवन गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । औषधिका लागि, अनुसन्धान गर्नका लागि विद्यमान कानुन पनि बाधक छैन । अहिले पनि डाक्टरको सिफारिसमा गाँजा औषधिको रूपमा प्रयोग गर्न पाइन्छ ।
लागुऔषधको रूपमा गाँजा
लागुऔषध नियन्त्रण ऐनको दफा ३ को १ नम्बरमै गाँजालाई लागुऔषधको रूपमा राखिएको छ । दफा ७ मा गाँजा भन्नाले भाङ र सिद्धसमेत गाँजा मूलको जुनसुकै बोटको पात र फूललाई राखेको पाइन्छ ।
चरेस तथा गाँजाको बोटबाट प्राप्त गरिएको खोटो, लिस्सा र चोबलाई पनि लागुऔषधको रूपमा व्याख्या गरिएको छ । गाँजाको चोबबाटै चरेसको निर्माण गरिन्छ । चरेस आफैँमा कडा लागुपदार्थ हो ।
गाँजा केवल गाँजा मात्रै होइन, चरेसको प्रमुख स्रोत पनि हो । अहिले नै देशमा ठूलो मात्रामा गाँजा र चरेसको अवैध कारोबार हुने गरेको छ । राज्यले रोक्न सकेको छैन ।
प्रशासनकै मिलेमतोमा गाँजा चरेसको कारोबार हुने गरेको लागुऔषध कारोबारीले बताउने गरेका छन् । स्थिति यति गम्भीर हुँदाहुँदै गाँजालाई अझै खुला गरिनुपर्छ भन्ने मागले समाजलाई झनै खराब स्थितिमा लैजाने निश्चित छ ।
वैज्ञानिक परीक्षणबाट गाँजालाई औषधिको रूपमा उपयोग गर्न सक्ने बताइएको छ । यदि त्यसो हो भने कति औषधि चाहिएको हो, औषधिका लागि मात्रै खेती कसरी गर्ने भन्नेबारेमा किन बहस भएको छैन ? केवल धनी हुने सपना देखाइएको छ ।
गँजडी समाजको खतरा
गाँजाले मान्छेलाई लठ्याउँछ । गाँजा खाएको मान्छेले आफ्नो दैनिक जीवनका कामहरू गर्ने रूचि राख्दैन । सामाजिक कामहरू गर्न रूचि राख्दैन । मान्छेको दिमागलाई निष्क्रिय बनाइदिन्छ । लागुऔषधले किशोर अवस्थाका विद्यार्थीलाई विभिन्न तरिकाबाट भड्काउन, भावनात्मक कुरा गरेर फसाउन लागुऔषध व्यापारीहरूले ठूलो प्रयत्न गर्ने गर्दछन् ।
लागुऔषधका कारण असफलता, निरासा, घरपरिवार र समाजबाट असहयोग, बेरोजगार, भड्काव, आत्महत्याजस्ता जटिल समस्या पैदा हुन्छन् र भइरहेका छन् ।
२०७३ सालमा गरिएको एउटा सर्वेक्षणमा नेपालमा १ लाख ३० हजार लागुऔषध प्रयोगकर्ता थिए । जुन संख्या २०६९ सालमा ९१ हजार ५ सय ३५ थियो । यो प्रतिवर्ष ११ प्रतिशतका दरले बढ्दै गएको देखिएको छ । यो अत्यन्तै विकराल अवस्था हो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय संस्थाले गरेको अध्ययनअनुसार विश्वमा ३० करोड लागुऔषध दुव्र्यसनी छन् । ३२ अर्ब डलरको लागुऔषध कारोबार हुने गर्दछ ।
विश्वमा हतियार, लागुऔषध र मानव तस्करी सबैभन्दा बढी कारोबार हुने तीन शीर्षकहरू हुन् । नेपालमा अवैध हतियारको त्यति ठूलो कारोबार नभए पनि लागुऔषध र मानव तस्करी ठूलो मात्रामा हुने गरेको छ ।
गाँजा सेवन लागुऔषध सेवनको प्रारम्भिक चरण हो । गाँजा खाने व्यक्तिहरू क्रमशः चरेस, अफिमजस्ता कडा लागुऔषध सेवन गर्दै जान्छन् । लागुऔषधको अम्मली भएपछि त्यसबाट निस्कन धेरै गाह्रो हुने गरेको विशेषज्ञहरूले नै बताउने गरेका छन् ।
लागुऔषधको दुव्र्यसनीबाट मुक्त गर्ने कैयौं प्रयत्न भए पनि धेरै व्यक्तिहरू अकालमै मर्ने गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९८८ देखि जून २६ लाई अन्तर्राष्ट्रिय लागुऔषधविरुद्धको दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको भए पनि नेपालमा लागुऔषध प्रयोगकर्ता घटेको देखिएको छैन ।
लागुऔषध नियन्त्रण ऐनको दफा १४ (१) क मा गाँजा सेवन गर्ने व्यक्तिलाई एक महिनासम्म कैद र २ हजार रूपैयाँ जरिमाना हुने व्यवस्था छ ।
५० ग्राम मात्रै गाँजा खरिद, बिक्री, पैठारी गर्ने व्यक्तिलाई ३ महिना कैद र ३ हजार जरिमानाको व्यवस्था छ । १० किलोभन्दा माथि भए १० वर्षसम्म कैद र १५ हजार जरिमाना तोकिएको छ ।
तर चिकित्सकको अनुमतिमा उपचार गरिरहेको व्यक्तिलाई कुनै व्यक्ति वा संस्थाले जिम्मा लिएमा कैद नहुन पनि सक्ने व्यवस्था छ । लागुऔषध नियन्त्रण ऐनको उद्देश्य के देखिन्छ भने गाँजा खाएर कुनै पनि व्यक्ति खत्तम नहोस् । उसको उपचार गर्न सकिने अवस्थामा उसलाई कैदसमेत नहुने व्यवस्था छ ।
देशलाई गाँजापुर बनाउन लागिएको हो ?
नेपाली राजनीतिमा खराब सपना देखाउने पुरानै रोग हो । सुरूमा कांग्रेसका कृष्णप्रसाद भट्राईलगायत केही नेताहरूले देशलाई सिङ्गापुर बनाउने बताउँदै आएका थिए । माओवादीका नेताहरूले पनि सिङ्गापुर बनाउने सपना बाँडेका थिए । तर देश सिङ्गापुर हुन सक्ने गरी कुनै योजना ल्याइएन ।
बहुदलीय व्यवस्था आएको ३० वर्षसम्म देशको विकासले सही ढंगले गति लिन सकेन । अहिले नेकपाका नेताहरूले गाँजा बेचेर समृद्धि ल्याउने र देशलाई धनी बनाउने सपना बाँड्न थालेका छन् ।
एकछिनलाई मानौँ, गाँजाबाट १ हजार परिवारलाई प्रत्यक्ष आम्दानी हुने भयो । त्यो ठीक होला । तर गाँजा खुला गरिएकै कारण १० हजार युवाहरू लागुऔषधको कुलतमा फस्दै गए भने १० हजार परिवार बर्बाद हुन्छन् ।
१ हजार परिवारका लागि १० हजार परिवारलाई बर्बाद बनाउने योजना आफैँमा कुरूप योजना हो । चोरी, तस्करीबाट पनि कैयौं व्यक्तिहरूले फाइदा लिएका हुन्छन् । तिनीहरूलाई फाइदा हुन्छ भनेर चोरी, तस्करी ठीक हो भन्न सकिँदैन ।
त्यसैगरी, केही व्यापारीले गाँजाको व्यापारबाट फाइदा लिन्छन् भनेर सिङ्गो समाजलाई ध्वस्त बनाउन सहयोग पु¥याउने लागुऔषध गाँजाको खेती र व्यापारलाई खुला गर्ने मागलाई सही मान्न सकिँदैन ।
नेपाली समाजको कमजोर चेतनास्तर, रक्सी, गाँजा, चरेस खाने खराब चरित्रका कारण समाज ध्वस्त हुँदै गएको छ । लागुऔषध रोक्नका लागि घुस्याहा कर्मचारीतन्त्र र प्रहरी प्रशासनले कुनै ध्यान दिएको छैन । झनै खुला गर्ने हो भने समाजमा गाँजा, चरेसजस्ता लागुऔषधको सेवन बढ्नेछ र त्यसले समाजलाई ध्वस्त बनाउनेछ ।
घुस्याहा कर्मचारीतन्त्र र प्रहरी प्रशासनका मान्छेहरूले करोडौँ अर्बौं कालो धन थुपार्ने मौका पाउनेछन् । देशलाई गाँजापुर बनाउने जुन प्रयत्न गरिएको छ, त्यसले केही मान्छे धनी पनि होलान्, पैसा पनि आम्दानी होला तर हाम्रो समाज ध्वस्त हुँदै जानेछ ।
त्यसको भयङ्कर दीर्घकालीन असर हुनेछ । हाम्रो युवापुस्ता गाँजापुरमा ब्यस्त हुनेछ । गाँजाको औषधीय गुणलाई उपयोग गर्ने कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्दछ । तर देशलाई नै गाँजापुर बनाउने गरी जसरी योजना ल्याइएको छ, यो खतरनाक योजना हो ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन २७, २०७६, ०३:२१:००
कोरोना कहर : एनजीओ/आईएनजीओको २६ करोड रुपैयाँ किन लिन सक्दैन सरकार ?